Izixhobo ezi-7 ezinkulu zomyili wewebhu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UFran Marin | | Izixhobo zoYilo, Bugcisa
Uyilo lwewebhu lunokuba yinkqubo ende, enzima kwaye inzima. Yiyo loo nto ibaluleke kangaka unezixhobo kunye neenketho ezikuvumela ukuba uhambise imisebenzi yakho uthenge ixesha. Siphila kwixesha apho kukho izixhobo ezininzi zewebhu kunye nokusetyenziswa okongeza okugubungela zonke iintlobo zeemfuno, ke kufuneka sisebenzise loo nto.
Emva koko ndingathanda ukwabelana nawe yimizekelo esixhenxe yayo, kwaye ndiyakumema ukuba wabelane nathi kwicandelo lamagqabaza nasiphi na esinye isixhobo osifumana siluncedo ekujonganeni neeprojekthi zewebhu.
1 I-Adobe Kuler
Ukudityaniswa kwemibala kunokuba nzima ngamanye amaxesha, nokuba kungenxa yokuba sineembono ezininzi eziphikisanayo okanye kuba asifumani nayiphi na ebonisa kakuhle amabango eprojekthi yethu. Kule meko iAdobe Kuler yeyona ndlela ifanelekileyo. Le nkqubo yasimahla ivela kwiAdobe yenzelwe ukwenza kube lula ukwenza imibala yemibala kunye nokufumana eyona indibaniselwano ifanelekileyo. Ungasifumana njani esi sicelo? Ukwenza oku, kuya kufuneka ubhalise njengomsebenzisi kwiphepha le-Adobe kwaye xa sele unegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha uya kuba nakho ukufikelela ngokukhawuleza. Andazi ukuba uyakhumbula na ukuba kwixa elidlulileyo ugxa wethu u-Antonio wenza ividiyo malunga nesi sixhobo. Unako ukufikelela kwividiyo yethu ukusuka apha.
Sithethile kumaxesha amaninzi malunga nokubaluleka kokuchwetheza kuyo nayiphi na iprojekthi kwaye ukuthatha isigqibo sokuba yeyiphi eyona inokuba yeyona ilungileyo nako kunokuba yingxaki. Ke ngoko, esi sicelo sinokuba sisixhobo esibalulekileyo amaxesha amaninzi ukwenza uyilo. I-Typecast iya kukuvumela ukuba ufikelele kwiifonti ezingaphezu kwamawaka amahlanu ukusuka kuTypekit, iGoogle Web Fonts kunye neFonts.com Fontdeck, zonke zivela kwiqela elinye lolawulo. Ngale ndlela uya kuba nakho ukukhetha uhlobo lochwethezo olulungele isitayile okanye ithoni yomsebenzi wakho ngendlela elula nengakhawulezileyo. Ukongeza, esi sicelo siyakuvumela ukuba wenze iikholamu zokucwangcisa ulwazi kunye nomxholo kunye nokuguqula okanye ukuguqula ifonti ekhethiweyo. Kuya kufuneka ukhethe umboneleli wakho wefonti kwimenyu esecaleni kwaye ukhethe nayiphi na kuzo ukufumana isiphumo ngqo kwiphepha elifanayo lewebhu. Ukongeza, ikwasivumela ukuba singene kwikhowudi ye-CSS ukuze sikwazi ukufaka ezo fonti ngqo kumaphepha akho ewebhu ngokuqinisekileyo ukuba abasebenzisi bakho baya kulayisha ifonti kwaye babone iziphumo ezifanayo nezakho.
Lulwandiso lwesicelo seAdobe Photoshop esiya kukuvumela ukuba ulungiselele uxwebhu lwakho ukuqala ukuyila amaphepha akho ewebhu kwaye okungcono kunakho konke, kuya kuba yimizuzu nje embalwa. Uninzi lwabayili bewebhu esi sixhobo sibalulekile, ngakumbi ngenxa yokuchaneka okubonelelwa zizikhokelo zokufezekisa uyilo olugqibeleleyo. Kufuneka nje uyifakele (ubunzima bayo buphantsi kakhulu njengokongezwa) ukuyonwabela.
Ukuba ufuna ukuphuhlisa iifowuni zakho zocingo esi sicelo siya kuba luncedo kakhulu njengoko siza kukuvumela ukuba uyile eyakho prototype kwimizuzu nje embalwa kwi-intanethi kunye neendlela ezahlukeneyo zamaqonga: Ukusuka kwi-iPhone, i-WordPress, i-Android, iJoomla, i-Facebook. Iziphumo ziya kuba kumgangatho ophezulu weeprototypes ekulula ukuzisebenzisa kwiiprojekthi zakho. Ukongeza, ukusebenza kwayo kulula kakhulu, kuyasebenza kwaye kuyasebenza kuba indlela yokusebenza isekwe kwinkqubo yokutsala kunye nokwehla ngokusebenzisa izinto okanye izinto ezikunikwa sisicelo ngokwaso. Ewe kunjalo, kuya kufuneka ukhumbule ukuba uhlobo lwasimahla lukuvumela kuphela iprojekthi enye enobude obukhulu bamaphepha amane, nangona unokuzikhuphelela iiprojekthi zakho ngeendlela ezahlukeneyo kwaye uzicime mzuzu uyeke ukuzisebenzisa.
Xa yakhutshwa yavuselela ulindelo olukhulu kwaye ayimangalisi loo nto. Isibhengezo sisixhobo esigxile ekubonakalisweni kweeprototypes kodwa umahluko obalulekileyo: Esi sicelo siguqula imisebenzi yakho ibe kukunxibelelana, iiprototypes ezinamandla kunye notshintsho kunye neopopayi zewebhu, ke ezakho iinkqubo zokufumana ulwazi ziya kufumana inyani enkulu. Ikwavumela ukuba wabelane ngeprojekthi yakho nabo bonke abasebenzisi obafunayo (kubandakanya nenkqubela phambili kubathengi bakho) ngoko kuyakhawuleza, kukhuselekile kwaye kuyasebenza xa usenza iprizenteyishini kwaye unxibelelana noyilo lwephepha lewebhu ngaphambi kokuqala kophuhliso lwayo.
Ngokuqinisekileyo ngaphezulu kwesihlandlo esinye sinobunzima ekulawuleni iinguqulelo zamva zeefayile ngaphakathi kweprojekthi. Ngokukodwa xa ifayile enye ihlelwa ngabantu abaliqela ngaxeshanye. I-Layervault sisicelo sewebhu esiya kukuvumela ukuba ulawule kwaye ulawule yonke imiba yeprojekthi yakho (unxibelelwano noogxa, ulawulo lwefayile, njl.njl.) Kwindlela efanayo. Ungayongeza kwibar yomsebenzi, eya kukuvumela ukuba ugcine ngokuzenzekelayo naluphi na utshintsho, ifayile, ifolda, njl.njl. kulawulo lwe LayerVault. Ke oogxa bakho beprojekthi baya kufumana uhlaziyo lokwaziswa ukuba yeyiphi imiba yomsebenzi ehlaziyiweyo okanye etshintshiweyo, kwaye siya kuthi sifumane ezi zaziso kwezinye izixhobo zethu ukuba siyazivumelanisa.
Siye sathetha ngayo ngamanye amaxesha, kodwa ukuba awuyazi loo nto, ndiza kukuxelela ukuba sisixhobo esiluncedo kakhulu xa kuziwa ekwakheni amaphepha ewebhu ngendlela ecwangcisiweyo necocekileyo. Iya kukuvumela ukuba ungenise izikhokelo zakho kwaye uqulunqe i-Sass kunye neZantsi kunye nokwandisa iifayile zakho ngokukhangela ngokukhawuleza nangokuzenzekelayo kwiprojekthi osebenza nayo nakwizakhelo zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Izixhobo ezi-7 ezinkulu zomyili wewebhu
Imigca yeveki, iifonti zekhompyuter
Ipakethi yeMega: + I-100 yeeMockups eziSimahla awunakuyihoya